काठमाडौं । कोरोना महामारीका बीच गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जीवन बीमा व्यवसायमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । चैत ११ गतेदेखि लगाइएको बन्दाबन्दीले गत आवको बीमा व्यवसायमा संकुचन आउने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर, असारसम्म आउँदा जीवन बीमा व्यवसाय बढेको छ ।
सरकारले बन्दाबन्दी लगाएपछि चैत, वैशाख र जेठमा बीमाशुल्क संकलन खुम्चिएको थियो । तर, असारसम्म आइपुग्दा बीमाशुल्क संकलन उच्च मात्रामा बढेको बीमा समितिको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ ।
चैत र वैशाखमा मासिक २ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बीमाशुल्क संकलन भएको थियो । जेठमा भने रू. ४ अर्ब ७४ करोड बीमाशुल्क संकलन भएको देखिन्छ । असारमा भने रू. २४ अर्ब ५५ लाख जीवन बीमाशुल्क संकलन भएको समितिको भनाइ छ ।
सरकारले असारमा बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउँदा व्यवसाय गर्न सहज भएको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । साथै, असारमसान्तको प्रभावले पनि व्यवसायमा सुधार आएको उनीहरूको भनाइ छ ।
तथ्यांकअनुसार गत आवमा जीवन बीमामार्फत रू. ९४ अर्ब ३८ करोड बीमाशुल्क संकलन भएको छ, जुन अघिल्लो आव २०७५/७६ को तुलनामा ३४ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमाशुल्क संकलन भएको थियो ।
गत आवमा बीमाशुल्क संकलन बढीमा १५ प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान गरिएको थियो ।
गत आवमा जीवन बीमामार्फत १ खर्ब रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, बन्दाबन्दी लगाइएपछि गत आवमा रू. ८० अर्बदेखि रू. ९० अर्बसम्म बीमाशुल्क संकलन हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, अनुमानभन्दा साढे ४ अर्ब बढी बीमाशुल्क संकलन हुनु सकारात्मक भएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडलले बताए ।
‘जीवन बीमा व्यवसाय आपैमा गाह्रो विषय हो । अभिकर्ताहरू घरघर गएर व्यवसाय ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, कोरोना त्रासका बीच पनि अभिकर्ताहरूले यस अवधिमा राम्रो व्यवसाय ल्याएको देखिन्छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’
जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष शिवनाथ पाण्डेले गत आवको व्यवसाय उत्साहजनक नै भएको बताए । ‘चैतदेखि जेठसम्म आउँदा जीवन बीमा व्यवसाय नमज्जाले प्रभावित भएको थियो । फलस्वरूप गत आवमा बीमाशुल्क संकलनमा संकुचन आउने अनुमान थियो,’ उनले भने, ‘तर, असारमा भने व्यवसाय रिकभर भयो । गत आवमा बीमाशुल्क संकलन करीब ३५ प्रतिशतले बढ्यो ।’
चालू आव भने बीमा व्यवसायका लागि चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले असारमसान्तको प्रभावले पनि व्यवसायमा सुधार आएको हो । तर, अभैm आर्थिक क्षेत्र पूर्णरूपमा चलायमान भएको छैन,’ उनले भने, ‘साथै, कोरोनाको त्रास पनि सकिएको छैन, यस अवस्थामा हाम्रा लागि आगामी दिन चुनौतीपूर्ण नै छन् ।’
बीमा व्यवसाय बढाउन वैशाख, जेठ र असार उपयुक्त समय हो । पुराना बीमालेखको नवीकरण गर्ने समय पनि यही बेला हुने र असार मसान्तको प्रभावले अघिपछि भन्दा असारमा बढी बीमाशुल्क संकलन हुन्छ । त्यसैले बीमाशुल्क संकलनमा सुधार आएको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।
१९ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये गत आवमा सबैभन्दा बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा नेपाल लाइफ देखिएको छ । नेपाल लाइफले गत आवमा रू. २८ अर्ब ३९ करोड बीमाशुल्क उठाएको छ । त्यसपछि लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालले रू. १५ अर्ब ३१ करोड बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । नेशनल लाइफले रू. ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले रू. ७ अर्ब ५ करोड संकलन गरेको छ । २ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको युनियन लाइफ इस्योरेन्सले रू. ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ ।